အကောင်းဆုံးသေစင်တာများ, မျက်နှာ Drive ကိုသေစင်တာ, Mills Cutter, တရုတ်အတွက် Mills Cutter ထုတ်လုပ်သူအတွက် CNC သေစင်တာများခုနှစ်တွင်သေစင်တာများ
Home > ထုတ်ကုန်များ > တိုက်ရိုက်စင်တာများသေလွန်သောသူတို့သည်စင်တာများ
သေလွန်သောသူတို့သည်စင်တာများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, သေလွန်သောသူတို့သည်စင်တာများ, မျက်နှာ Drive ကိုသေရေးစင်တာ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Mills Cutter ခုနှစ်တွင်လူသေစင်တာများ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အမြင့်တိကျစွာတိုက်ရိုက်အလယ်ဗဟို mt4 သေပြီစင်တာ
High Quality MT2 သေစင်တာများ
အမြင့်တိကျစွာတိုက်ရိုက်အလယ်ဗဟို mt4 သေပြီစင်တာ စက်အတွက် High Quality MT2 သေစင်တာများ, စက် tool ကိုစိတျအပိုငျး။ အဆိုပါ pieceworker ကန်တော့ချွန်ဆန့်ကျင်က၎င်း၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူစက် tool ကိုဗိုင်းလိပ်တံ taper သို့မဟုတ်အမြီးစတော့ရှယ်ယာဝင်ရိုးတွင်း၌ installed တစ် taper Shanks နှင့်အတူအမြီး, ။...
High Quality MT2 သေစင်တာများ စက်အတွက် High Quality MT2 သေစင်တာများ, စက် tool ကိုစိတျအပိုငျး။ အဆိုပါ pieceworker ကန်တော့ချွန်ဆန့်ကျင်က၎င်း၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူစက် tool ကိုဗိုင်းလိပ်တံ taper သို့မဟုတ်အမြီးစတော့ရှယ်ယာဝင်ရိုးတွင်း၌ installed တစ် taper Shanks နှင့်အတူအမြီး, ။...
တရုတ်နိုင်ငံ သေလွန်သောသူတို့သည်စင်တာများ ပေးသွင်း
မူလအစ၏ဇာ: ရှန်ဒေါင်း, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Tool ကိုပင်
အချင်း: 17.780mm သေစင်တာများ
အရှည်: Dead စင်တာများ c100mm
Wt .: 0.150kg အီးသေစင်တာများ
လျှောက်လွှာ: စက် tool ကိုဗိုင်းလိပ်တံ
1 စက်၏ Level Adjust
မြင့်တက်2ဖြောင့်ခြင်းနှင့်ဒေါင်လိုက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း mechansim လဲကျ
အဆိုပါ operating ပလက်ဖောင်းမျက်နှာပြင်၏ 3. ဒေါင်လိုက်ကော်လံ၏လမ်းညွှန်လမ်းကြောင်းမျက်နှာပြင်မှ
ဟာ operating ပလက်ဖောင်းများ၏ datum ကို T-slot က4Straigtness
အဆိုပါ operating ပလက်ဖောင်းမျက်နှာပြင်၏ 5. Plains
ဗိုင်းလိပ်တံအဆုံး၏ 6. လှို
ဗိုင်းလိပ်တံထွင်းဖေါက်-ပေါက်ဝင်ရိုး၏ 7. မြို့ပတ်ပြေး ou
ဟာ operating ပလက်ဖောင်းဖို့ဗိုင်းလိပ်တံ၏ rotaryaxis 8 Parallel
ဗိုင်းလိပ်တံ၏ rotary ဝင်ရိုး၏ 9. ဒေါင်လိုက်လည်ပတ်မှုပလက်ဖောင်းမှ
အဆိုပါ datum "T မှလည်ပတ်မှုပလက်ဖောင်း၏ longitudinal လှုပ်ရှားမှု၏ 10 Parallel [-shot
ဟာ operating ပလက်ဖောင်းများ၏ longitudial လှုပ်ရှားမှုဖို့ transverse လှုပ်ရှားမှု 11. ဒေါငျ
လှုပ်ရှားမှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် platfor ၏မျက်နှာပြင်အကြား 12 Parallel
မျက်နှာ Drive ကိုသေရေးစင်တာ
Mills Cutter ခုနှစ်တွင်လူသေစင်တာများ
Mills Cutter အတွက် CNC သေစင်တာများ